Naya Post Nepal | १२ गते ‘दस हजार’ युवाले संसद भवन घेर्न रास्ट्रवादी केन्द्रको घो’षण ! (भिडिओ हेर्नुस्)
१२ गते ‘दस हजार’ युवाले संसद भवन घेर्न रास्ट्रवादी केन्द्रको घो’षण ! (भिडिओ हेर्नुस्)
१२ गते ‘दस हजार’ युवाले संसद भवन घेर्न रास्ट्रवादी केन्द्रको घो” षण ! (भिडिओ हेर्नुस्) भिडियो समाचारको अन्तमा छ भिडियो हेर्नू सिधै तल जानुहोस ।
एमसिसी राष्ट्रको हि’तमा छ, जसरी पास गराैँ ! प्रधानमन्त्री देउवा – काठमाडौं, । प्रधान मन्त्री शेर बहादुर देउवाले एम’सी’सी बारे संस दले नै फैसला गर्ने ब’ताएका छन् । बिही’बार राजधानी’ मा आयो ’जित एक कार्यक्रम’मा बाल्दै प्रधान मन्त्री देउवाले
एमसीसी पास गर्ने पक्ष’मा आफू रहे’को तर संसदले पा’स या फेल जे गरे पनि स्वी’कार गर्ने बताए । कार्यक्रम मा उनले एमसी सी पास गर्ने पक्षमा रहन पार्टी पङ्ति हरु लाई नि’र्देशन समेत दिएका थिए ।
उनले भने, ‘एम’सी’सी संसद’मा पा’स र फेल के हुन्छ थाहा छैन । यद्यपि नेपली काँग्रेस भने जस’री पास गर्ने पक्षमा रहे’को छ । एम सीसी को पक्षमा उभिन डराउनु हुँदैन । यो राष्ट्रको हि’त मा छ । हामी आफ्नो अडान’मा उ’भिएर जानु पर्छ।’
एमसीसी पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने’मा सत्ता गठबन्धन’मै सहमति जु’ट्न सकि रहेको छैन । जसका का’रण सत्ता ग’ठबन्धननै खत ’रामा रहे को छ ।
बुधबार को संसद बैठकमा एम’सी’सी टेबुल हुने भनिएता पनि नेक पा माओवादी केन्द्रको का’रण हुन सकेन । अर्को बैठक मा’र्फत ए म’सी’सी टेबुल गर्ने त’यारी भइरहे को छ ।
यस्तै,। अमेरिका’ले एम’सी’सी मार्फत नेपाल लाई ध,म्की दिएमा ची न स,हदैन : चीन – कामाठडाैं। अमेरिकाले मिले’नियम च्यालेन्ज क र्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपालब सँग ‘धम्की कु,टनीति’ काे सु,रु वात गरे’को चीनले आ”रोप लगाए’काे छ ।
शुक्रबार बेइ’जिङमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत चिनियाँ विदेश मन्त्रा लय’का प्रवक्ता वाङ् वन पिनले एमसीसी मार्फत् अमेरि काले ‘ध, म्की कु,टनीति’ सुरू गरेको आ”रोप लगाए’का हुन् ।
अमेरिकाले एम’सी’सी मार्फत त्यसरी धम्की दिए मा चीन चु,प न लाग्ने र त्यस’को क’डा प्र”तिरोध गर्ने पनि उनले बता’एका छन् ।
‘अमेरिका’ले नेपाल सँगको सहकार्य’को नाममा ‘ध’म्की कु’टनीति’ सुरू गरेको छ। यसको चीनले प्र’तिरो’ध गर्नेछ,’ उनले भने ।
एक जना पत्र,कारले सम्मे,लनमा अमेरिका’ले नेपाल’लाई एमसी सी पारित गर्न द”बाब दिइरह को र यस विषयले अमेरि’का-नेपा लको सम्बन्ध मा उतार’चढाव हुन सक्ने कुरा’लाई मध्यन’जर गर्दे प्रश्न गरे’का थिए ।
उक्त प्रश्न’को जवाफ’मा प्रव’क्ताले पिन’ले अमेरिका ले ज’बर्ज’स्ती गर्न खो’जे चीन चुप लागेर नबस्ने बताए ।
चीनले नेपाल ले आफ्नो विकास’को स्व’तन्त्र बाटो रोज्न सक्ने र मन लागेको सँग साझा रुपमा अघि बढ्न सक्ने पनि सुझाव दिए को छ । यस सवाल मा चीनले सदैव स’मर्थन गर्ने पनि भनेको छ ।
नेपाल ले एमसीसी पारित नगरे चिनियाँ हस्तक्षेप का उक्त सम्झौ’ता रद्ध भएको भनेर बु’झ्ने अमेरि काको उक्त जब,र्ज स्ती’लाई चीनले ‘ध’म्की कूटनी ति’ भनेर भनेको छ ।
१२ गते ‘दस हजार’ युवाले संसद भवन घेर्न रास्ट्र’वादी केन्द्रको घो’षण ! (भिडिओ हेर्नुस्)
भिडियो नेपाल पुकार बाट
२०७८ फाल्गुन ११, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 397 Views